युगसम्बाद साप्ताहिक - प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईबाट शपथग्रहण : शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय सहमति प्रमुख चुनौति
Monday, 02.17.2020, 02:52am (GMT+5.5) Home Contact
Monday, 08.29.2011, 03:57pm (GMT+5.5)
संविधानसभा निर्वाचनयता मुलुकले चारजना वामपन्थी प्रधानमन्त्री पाएको छ । दुई प्रमुख वामपन्थी दल एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले तीन वर्ष तीन महिनाको बीचमा दुई–दुईपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । सुरुमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो भने त्यसपछि एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । त्यसै गरी नेपालको राजीनामापछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र उहाँपछि माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । आइतबार सम्पन्न प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा डा. भट्टराईले ३४० मत प्राप्त गरी बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको हो । कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले २३५ मत प्राप्त गर्नभएको थियो । डा. भट्टराईलाई मधेशी मोर्चा र अन्य दलको समर्थन रहेको थियो भने पौडेललाई एमाले, राप्रपा र अन्य केही साना दलले मात्र साथ दिएका थिए । डा. भट्टराई मुलुकको ३५ औं प्रधानमन्त्री बन्नुुभएको छ । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी पहिलो जननिर्वाचित वामपन्थी प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ।
मुलुकमा समस्यै समस्याको पहाड चुलिंदै गएका बखत जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाउनुभएका डा. भट्टराईका लागि चुनौतिको पहाड नै खडा छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेर केही गर्नसक्ने नेताको छवि बनाउनुभएका डा. भट्टराईका लागि आगामी दिन त्यति सहज भने छैन । उहाँ काँडैकाँडाको झाडीबीच हुनुहुन्छ । संविधानसभाभित्रका सुयोग्य व्यक्तित्वमा पर्नुहुने डा. भट्टराईलाई साथ दिने मधेशी दलहरू सधैं अवसरको खोजीमा रहने छन् । त्यस्तै कांग्रेस र एमालेमा सिर्जनात्मकता, दूरदृष्टि र समस्याको समाधान खोज्ने चाहना र क्षमता नभएको देखिइसकेको छ । एमालेले दुईपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि केही गर्न सकेन भने कांग्रेस आफू सबैभन्दा पुरानो पार्टी भएकै नाताले मात्र सत्तामा पुग्नुपर्ने दावी प्रस्तुत गरिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, शान्ति प्रक्रियाको सार्थक निष्कर्ष, संविधान लखेनकार्य सम्पन्न गर्ने र मुलुकमा विधिको शासन स्थापित गर्ने गहन जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको काँधमा आएको छ ।
शान्ति र संविधानको एकसूत्रीय मार्गचित्रमा अडिग रहनुभएका डा. भट्टराईका सामु अब आफ्नो अडान र प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गहन जिम्मेवारी आएको छ । बढ्दो अराजकता र कमजोर शान्ति सुरक्षाले गर्दा जनतामा बढ्दै गएको निराशालाई आशामा परिणत गर्ने गहन दायित्व एकातिर छ भने अर्कोतिर गिर्दो राष्ट्रिय सम्मानलाई कसरी उच्च राख्ने भन्ने सवाल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । कुराभन्दा काम गर्न रुचाउने नेता भनेर चिनिनुभएका डा. भट्टराईको काँधमा मुलुकमा परिवर्तनको अनुभूति गराउने जिम्मेवारी थपिएको छ । जनताको अपार समर्थन र विश्वास पाउनुभएका डा. भट्टराईले आफूलाई सोही अनुसार ढाल्नुपर्छ । त्यसका लागि आइपर्ने अनगिन्ती चुनौतिहरूलाई पन्छाउँदै हिंड्ने हिम्मत गर्नुपर्दछ । सत्ता स्वार्थका लागि जस्तोसुकै शर्त स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय स्वाभीमानलाई उच्च राख्ने काम डा. भट्टराईका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौति हो ।
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्मा सम्बोधन गर्दै डा. भट्टराईले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याएर संविधान लेखन कार्य सम्पन्न गर्ने तथा निराश हुँदै गएका जनतामा आशाका दियो जगाउने काम आफूबाट हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । चुनौतिको सामना गर्न र समस्यासंग जुध्नसक्ने क्षमता भएकैले उहाँको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा मुलुकमा केही राम्रा काम हुने विश्वास धेरैले गरेका छन् । अर्कोतिर बहुमतीय नै भए पनि यो सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको आकार दिने प्रयास गर्ने बताइएको छ तापनि पनि कांग्रेस र एमाले त्यसमा तत्काल सहमत हुने देखिन्न । यी दुई दल प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गरिसकेका छन् । संविधानसभाको दोस्रो र तेस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने स्थितिले सरकारलाई सजिलै बाटो छोड्लान भन्नसकिने अवस्था छैन । कांग्रेस र एमालेलाई राष्ट्रिय मुद्दामा समाहित गराएर निर्धारित समयमै शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउनु चानचुने कुरा हैन । जसको नेतृत्वको सरकार बने पनि त्यसलाई राष्ट्रिय स्वरुपको सरकार बनाउनुपर्ने भए पनि माओवादीले मधेशी मोर्चासंग चारबुँदे सहमति गरेर उनीहरूको समर्थन पाएको कुरा पनि यहाँ बिर्सन सकिन्न । प्रत्येकपटक सरकार गठन हुँदा कुनै न कुनै समूहसंग सहमतिमा सहीछाप गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति यसपटक पनि देखियो ।
स्पष्ट, बौद्धिक क्षमताले पूर्ण र खह्रो स्वाभावका मानिनुहुने डा. भट्टराईलाई मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा पाउनु शान्ति र संविधानको मार्गमा अनेकतिरबाट उत्पन्न अवरोध हटाउन सहायक सिद्ध हुने धेरैको विश्वास छ । उहाँलाई पार्टीबाट विगतका सरकारलाई जस्तो असहयोग हुने सम्भावना टरेको छ । गत जेठ १४ गते संविधानसभाको म्याद थप्ने बेलामा गरिएको पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयनका सवालमा दोहोरो सुरक्षा प्रणाली हटाउन अस्वीकार गर्नुभएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले शनिवार नै माओवादी लडाकूको सुरक्षा हटाउनुभएको थियो । यस हिसाबले हेर्दा माओवादीभित्र अहिले शक्ति सन्तुलनको अवस्था देखिएको छ । अहिले पार्टीभित्र एकता रहेका कारण डा. भट्टराईलाई काम गर्न केही सजिलो हुने मान्न सकिन्छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार मुलुकको मुल मुद्दा शान्ति र संविधान भएका कारण डा. भट्टराईसामु माओवादीको प्रधानमन्त्री बन्ने कि मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने अहम् सवाल खडा भएको छ । यसअघिका तीन प्रधानमन्त्रीहरू पार्टी स्वार्थबाट बाहिर निस्कन नसकेको अवस्थामा आफ्नै पार्टीभित्र पनि शान्ति र संविधानको पक्षमा ‘भीमसेन थापा बन्न तयार रहेको’ प्रतिक्रिया दिएर मुलुकबासीलाई भावुक बनाउनुभएका डा. भट्टराई अब शान्ति र संविधानको पक्षमा एकलब्य भएर लाग्नुपर्ने छ ।
प्रधानमन्त्रीका लागि भयो यस्तो दौडधूप (08.29.2011)
अनर्गल अलाप-विलापको निरन्तरता (08.29.2011)